Nepal Mamila | आईपीओमा ७८ अर्ब लगानी, इतिहासकै उच्च ! - Nepal Mamila आईपीओमा ७८ अर्ब लगानी, इतिहासकै उच्च ! - Nepal Mamila
काठमाडाैं । सेयरको प्राथमिक बजारमा (आईपीओ) यो वर्ष ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । जुन २८ वर्षको इतिहासमै उच्च हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स–साना बचत संकलन गरी दीर्घकालिन पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने बोर्डले उद्देश्यले सफलता हासिल गरेको जनाएको छ ।